I-10 ye-SAT Test Test Tips and Tips
Iingcebiso zoVavanyo zokuPhakamisa amanqaku akho eSAT
Ukuthatha naluphi na uvavanyo lunzima. Sonke siyazi ukuba inyaniso. Kodwa ukulungiselela uvavanyo ngamnye kuya kukunceda kumanqaku ahlukeneyo, kuba uhlobo ngalunye lweemvavanyo ezimiselweyo lubekwa kunye nemithetho yalo.
Awukwazi ukuthatha zonke iimvavanyo eziqhelekileyo ngendlela efanayo!
I- SAT Rededigned ine-set of rules of which you must know for the score. Ngenhlanhla, ndinemicebiso yokuhlola i-SAT yakho apha eyokunyusa ixesha lakho ngenxa yokuba ilandela imithetho ye-SAT.
Funda kwi-SAT yokukhuthaza amanqaku!
Sebenzisa iNkqubo yokuCima (POE)
Lahla izinto ezininzi ezingalunganga njengoko unako kwi-SAT ngaphambi kokuphendula umbuzo. Izimpendulo ezingalunganga zilula ukufumana. Khangela ukugqithisa okunjengokuthi "akakho" "kuphela" "rhoqo" kwiimvavanyo zokuFunda ; Khangela izichaso kwicandelo leMathe njenge-substitution of -1 ye-1. Funa amagama afana nokufana nokuhlolwa koLwimi nokuLwimi njengokuthi "kuhlangene" kwaye "ukuthobela."
Awusaphinde uhlawulwe ngenxa yezimpendulo ezingalunganga! Woo hoo! I-SAT Rededigned i-SAT iguqulele isohlwayo sesigwebo se-1/4 yeempendulo ezingalunganga, ngoko ke uqagele, ukuqagela, ukuqaphela emva kokusebenzisa inkqubo yokucima.
Bhala kwiNcwadana yokuVavanya
Sebenzisa ipensela yakho ukuze uqale ukhetho olungalunganga, ubhale phantsi iifomula kunye nokulingana, ukulungisa iingxaki zamatriki, ukucacisa, ukucacisa kunye nokugxininisa ukukunceda ufunde. Akukho mntu uya kufunda oko wabhala kwincwadana yokuvavanya, ngoko-ke ukuyisebenzise ukuze uzuze.
Ukutshintsha Imibuzo Yakho ekupheleni kweCandelo ngalinye
Esikhundleni sokubuyela ngaphaya naphakathi kwe-scantron kunye nencwadana yokuvavanya, bhala nje iimpendulo zakho kwi-ncwadana yokuvavanya uze uthumele kuzo ekupheleni kwecandelo ngalinye / iphepha. Uya kwenza iimpazamo ezimbalwa kwaye ugcine ixesha. Akukho nto embi ngaphezu kokufikelela ekupheleni kwecandelo kwaye uqaphela ukuba awunayo i-oval ukugcwalisa umbuzo wokugqibela.
Kunzima kakhulu ukugqiba zonke iingxaki kwaye ugcine ukuchaneka. Nciphisa kancane, phendula imibuzo embalwa ngokuchanekileyo endaweni yokuqagela kuyo yonke into. Uzakufumana amanqaku angcono xa uphendula i-75% yemibandela ekuvavanyeni kwaye uphendule ngokuchanekileyo, kunokuba uyaphendula onke kwaye ufumane i-50% eyiyo.
Khetha Yiphi i mibuzo ekuphenduleni kuqala
Awunayo ukugqiba amacandelo okuvavanya ngendlela. Hayi, awukwazi ukuxhuma kwi-Math ukuya kuBhala, kodwa ngokuqinisekileyo unqumla ngaphakathi ngaphakathi kwicandelo ngalinye. Ukuba unamathele kumbuzo onzima kwi-Test yovavanyo, umzekelo, ngeendlela zonke, bhanqa umbuzo kwincwadi yakho yokuvavanya uze uqhubeke nombuzo obulula. Awufumani nawaphi na amanqaku angaphezulu kwimibuzo enzima. Fumana iphuzu elilula xa unako!
Sebenzisa i-Order of Difficult to Your Benefits kwiCandelo leMathematika
Ngenxa yokuba icandelo leMathematika le-SAT lihlelwe ngokungaqhelekanga kwizinto ezilula kunzima kakhulu, iimpendulo ezicacileyo malunga nokuqala kwecandelo zinokwenene zichanekile. Ukuba ungowesithathu kwisigaba secandelo, kunjalo, qaphela ukuba ukhetho olucacileyo - mhlawumbi luphazamisayo.
Musa ukunika ingcamango yakho kwi-SAT Essay
Nangona isincoko se-SAT ngoku sikhethwa, kuya kufuneka ufune ukuyithatha.
Kodwa akufani nesincoko esedlulileyo. Incoko ye-SAT ehlaziyiweyo ikucela ukuba ufunde ingxabano kwaye uyihlaziye . Ngeke usacelwa ukuba unike umbono wakho; Kunoko, uya kufuneka udilize uluvo lomntu ngaphandle. Ukuba usebenzisa i-50 yemizuzu yakho ubhala isicatshulwa esichukumisayo, uya kubhobhoza.
Ukuqhawula umgca wakho
Ukuba unayo ixesha ekupheleni kwecandelo, qwa lasela iimpendulo zakho kunye ne-scantron ovals. Qinisekisa ukuba awuzange uphoswe umbuzo!
Yithemba lakho isisu! Izibalo zibonisa ukuba ukhetho lwakho lokuqala luqhelekile. Musa ukubuyela emva kokuvavanya kwaye utshintshe iimpendulo zakho ngaphandle kokuba ufumene ubungqina bokuba awukho mthethweni. Isiqalo sakho sokuqala sichanekile.
Ezi ngcebiso ezilishumi zingaba ngumsindisi xa uthabatha i-SAT, ngoko qi niseka ukuba ulandele bonke!
Oko Kufana nokuba nguMthikazi
Yintoni i-GOP isiseko?